Root Huawei P9 Lite miaraka amin'ny 7.0 Nougat | Androidsis
Francisco Sanchez | | Android Root, Huawei, Tutorials, Android Version
Androids tena tsara, tonga aho hampianatra anao izao Ahoana no faka Android amin'ny Huawei P9 Lite miaraka amin'ny Android Nougat (7.0) amin'ny fomba mora sy mahomby.
Satria tsy dia nahita fampianarana amin'ny teny Espaniôla momba ny fomba famongorana ity kinova Android vaovao ity aho, androany dia manamboatra iray izay hanazavako amin'ny antsipiriany ny fomba manaraka. Mariho mialoha izany Ity dingana ity dia tsy sarotra raha manaraka ny fomba hentitra ireo dingana izay hazavaina. Andao hanomboka!
2 Mangataha kaody
3 Alefaso ny safidin'ny mpamorona
4 Vohay ny bootloader anao
5 Fanarenana tselatra
6 Sintomy Root Checker maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Ny fanarahana an'io dingana io dia mitaky risika, manomboka izao dia lazaiko fa raha manaraka an'ity dingana ity ny fampianarana dia tsy tokony hisy olana. Na izaho na ny Androidsis dia samy tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana mety haterinao amin'ny terminal anao.
Rehefa mamoha ny bootloader dia very antoka isika, noho izany dia ampirisihiko hanao izany foana rehefa tafavoaka izany isika.
Alohan'ny hanaovana zavatra, andramo ny manao backup hatramin'ny dingana manaraka manao orinasan-tsarimihetsika indray ary mamafa ny angona rehetra avy amin'ny fahatsiarovana anatiny.
Para angataho ny kaody anay ny tsy maintsy ataontsika dia ny mankany amin'ny pejy sisa eto, hitaky fisoratana anarana hahafahantsika mangataka azy io, kitiho eo Download ary avy hatrany avy eo Sokafy ny bootloader. Amin'ity baiko ity:
Isa maodely. (Hita ao amin'ny About the phone io. Zava-dehibe: Ataovy HUAWEI VNS-LXX, rehetra amin'ny sora-baventy ka tsy misy fifanolanana)
Nomeraon-tandahatra. (Azo jerena amin'ny About phone> Status)
IMEI. (Vita amin'ny alàlan'ny antso an-tariby amin'ny dialyp / numeric keypad izany 06 #, raha manana olana amin'ny pejy ianao rehefa miditra amin'ny IMEI ary manana sim roa, andrana aloha ny iray ary avy eo iray hafa)
Product ID. (Tratra ity kaody ity 1357946 # * # *)
(Raha vantany vao azonao ny kaody mamaha 16 isa, alao izy ary tazomy amin'ny hidin-trano sy ny lakile)
Alefaso ny safidin'ny mpamorona
Mandehana any amin'ny safidin'ny mpamorona (Momba ny fitaovana> Tsindrio imbetsaka amin'ny isa fananganana). Zahao ny boaty momba ny OEM Unlocking sy ny USB debugging, Ity dingana ity dia zava-dehibe satria azonao avela tsy hampiasaina intsony ny terminal anao, na dia ny hitondra azy any amin'ny teknisianina aza. Ny ankamaroan'ny brickeos dia noho ny tsy fampandehanana ireo safidy ireo.
Tsindrio eo Momba ny telefaona
Tsindrio imbetsaka amin'ny isa fananganana ary ny safidin'ny mpamorona dia halefa
Miditra amin'ny safidy ho an'ny mpamorona
Izahay dia mamela ny mamoha OEM sy ny debugging USB
Azontsika atao izao ny manohy mamaha ny bootloader antsika amin'ny manaraka fanarenana tselatra ary apetraho ny faka.
Vohay ny bootloader anao
Avelako ho anao ity mpametaka mpamily fiara ity, fitaovana manokatra, Recovery + Root (misaotra an'i Eloy Gómez sy ireo mpiara-miasa amin'ny XDA).
Esory ny fisie ao anaty fampirimana izay eo am-pelatananao, dia manatanteraka ny fikandrana baiko ary mametraka ny mpamily manerantany sy HiSuite izahay, manaraka ny torolàlana voalaza ao amin'ny console console izahay. Hanontany anay fidirana amin'ny maody fastboot, vonoinay ny terminal anay, raha vantany vao manery ny Volume- ary mampifandray ny terminal anay amin'ny pc. (Hafahafa, eny, fa izany no fanaon'ireo mpikirakira Kirin 650.)
Rehefa miditra ny kaody mamoha anay dia hampiseho varavarankely ny terminal, mifindra mankany ENY isika amin'ny bokotra volume + ary manamafy amin'ny bokotra herinaratra. Hanatanteraka famerenana amin'ny laoniny ho azy ary hamerina izy io.
Ankehitriny isaky ny manomboka ny terminal isika, na dia efa nanao root aza dia hiseho io efijery fampitandremana io, te hilaza amintsika an'izany ny terminal anay dia voahidy ny bootloader, press Power ary hanomboka ara-dalàna ny telefaona.
Raha vantany vao mandeha ny terminal, tahirizo ny fisie SuperSu 2.79 izay nesorinay teo aloha avy amin'ny zip amin'ny SD ary amin'ny fitadidiana anatiny raha sanatria ka tsy mamaky antsika iray amin'ireo fahatsiarovana roa ny fanarenana.
Avy eo isika dia tsy maintsy manazava ny fanarenana, Novonoinay ny terminal anay ary natombotsika tamin'ny fomba fastboot Araka ny efa nolazainay teo aloha, tsindrio ny bokotra Control + Shift sy ny bokotra totozy havanana ao anatin'ny fampirimana mamoha, avy eo eo amin'ny varavaran-kaom-baiko Open open here
Raha te hahalala raha hitan'ny pc ny terminal dia manoratra izao baiko manaraka izao izahay: sns (ho azonao ny laharana serial)
Soraty izao baiko manaraka izao raha te handrehitra ny fanarenana: fastboot flash recovery twrp-3.1.0-2-hi6250 (Hamelombelona ny fanarenana izany)
Raha vantany vao vita izany, dia mitoetra fotsiny ny mampandeha ny fisie SuperSu 2.79 amin'ny alàlan'ny Recovery sy Hanana tombony fototra amin'ny Huawei P9 Lite miaraka amin'i Nougat isika.
Azontsika atao ny manamarina azy amin'ny alàlan'ny fampidinana avy amin'ny Play Store, Root Checker izay manamarina raha manana tombontsoa faka isika.
Sintomy Root Checker maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Root ny Huawei P9 Lite miaraka amin'ny Nougat 7.0
Misaotra anao, lahatsoratra tena tsara ary miaraka amin'ny antsipiriany be dia be ho an'ireo fizotrany malemy toa an'ity iray ity.
eloy dia hoy izy:
Asa tsara Fran. Na dia te hahita anao amin'ny hetsika video aza aho hehe. Fantatrao ny eritreritro, famihinana vaky.
Mamaly an'i eloy
raul flores dia hoy izy:
Salama . Miarahaba anao, ny tutorial dia feno sy mazava tokoa, ny ezaka sy ny fanoloran-tena dia ankasitrahana indrindra
Mamaly an'i raul flores
Miarahaba anao avy any Mexico, fampianarana tena tsara.
Mpamily nametra-pialana dia hoy izy:
Fanazavana marina, lahatsoratra tsara ary tena ilaina
Valio ny mpamily nametra-pialana
Salama tiako ho fantatra raha afaka mampakatra naoty na video momba ny fomba fanaovana root + twrp mankany amin'ny Doogee y6 Max ianao. Misaotra
Misaotra anao tutorial tsara dia tsara nohazavaina tsara ary misaotra amin'ny fanampiana omenao anay amin'ny vondrona androidsis
Misaotra betsaka anao Francisco fa nanazava tsara dia tsara hatrany !!
Misaotra Francisco manazava tsara ny arahaba !!!
Fampianarana tena tsara, nohazavaina tamin'ny antsipiriany maro mba hahafahan'ny tsirairay manao azy tsy misy olana. Manantena lahatsoratra maro hafa toa izao aho. Misaotra betsaka.
Yohel dia hoy izy:
Salama, afaka manao an'ity dingana ity aho raha tsy misy Huawei p9 lite miaraka aminy
Valio i Yohel
Salama, ny fanontaniako rehefa mahita ny tutorial iray manontolo dia raha vantany vao voahidy ny bootloader ary napetraka ny fanarenana hamaka azy ... Isaky ny manomboka ny sela isika dia hiseho ilay afisy izay nanokafantsika ny bootloader. Satria toa manelingelina izany raha toa ka manana ny fandrehitra mandeha ho azy aho
Francisco Espinar Aguilera dia hoy izy:
Salama, manana voninahitra 9 aho ary rehefa avy namoha ny bootloader dia tsy afaka mametraka ny sitrana satria
oem unlocking dia maty ary tsy azo ampandehanana, tsy haiko raha manana vahaolana izany, misaotra
Valio i francisco espinar aguilera
Pablo Esteban dia hoy izy:
Salama, tsy ao ireo rohy fampidinana, inona no tokony hataoko?
Valiny tamin'i Pablo Esteban
Manana ny rohy fampidinana ianao, mbola tsy hitako ihany koa
Salama, arahaba tsara ny zava-drehetra fa tsy afaka nanohy ny fametrahana ny recobery intsony aho satria nanidy OEM dia tsy mandeha intsony, izany hoe tsy afaka mampihetsika azy aho na zavatra hafa toa izany. Izay vahaolana ho an'izay dia tena mankasitraka aho.
Matías Arriagada dia hoy izy:
Salama, tratry ny tolakandro ary tratry ny taona vaovao, hanombohana ny taona feno dia nanapa-kevitra ny hanongotra ny findaiko aho, fa inona no mitranga? Rehefa tonga amin'ilay dingana "Sakano ny bootloader anao" izay milaza fa mamela installer automatique izy ireo, tsy eo ity iray ity, ahoana no hanohizako hamaka?
Valiny tamin'i Matías Arriagada
Tsy hitako ireo rohy fampidinana. Misy olona manampy ahy azafady?
Tsy hitako ireo rohy. Misy olona manampy ahy azafady?
Alexander Robledo dia hoy izy:
Aiza ireo rohy fampidinana?
Valiny tamin'i Alejandro Robledo
Aiza no ahitako ilay rohy?
Firy ny telefaona rava?
Telefaona maro simba manodidina
Gustavo E. dia hoy izy:
Avelako eto izany, io ny rohy fampidinana, ny marina dia ny boky torolàlana tena tsara saingy tsy hita ireo rohy, misaotra an'i Juan Roberto Garcia sy ny pejy nahitako azy.
Valiny tamin'i Gustavo E.
LG G6 Pro sy Plus dia afaka nanomboka tamin'ny 27 Jona, V30 ho tonga amin'ny volana septambra
Ny safidy tsara indrindra amin'ny FaceTime ho an'ny Android